Ahoana ny fomba hisafidianana haingana sy fanovana lahatsoratra amin'ny 3D Touch | Avy amin'ny mac aho
Applelised | | iOS, Tutorials, maro
Raha tompon'ny iray amin'ireo vaovao ianao iPhone 6s o iPhone 6s Plus Tsy isalasalana fa ny fihatsarana lehibe ho hitanao dia noho ny fampidirana ny haitao Force Touch ankehitriny nantsoina hoe 3D Touch. Ity fisehoan-javatra vaovao ity dia maneho fomba iray hafa amin'ny fifandraisana amin'ny iPhone, fanatsarana ny fahaizantsika manao asa mahazatra kokoa ary noho izany mampitombo ny vokatra. Fa marina ihany koa fa mitaky fihodinana ianarana io, kely indrindra, nefa ilaina. Izany no antony anoloranay tetika vaovao anao anio mba hitrandrahana tsara 3D Touch- Safidio haingana ary amboary ny lahatsoratra.
Miaraka amin'ny vaovao iPhone 6s sy 6s Plus, mora kokoa ny mifantina lahatsoratra ho fanovana fanampiny. Mampiasa ny fiasa vaovao 3D Touch Azonao atao ny mamadika ny klavinao ho trackpad amin'ny ankamaroan'ny rindranasa Apple ary mampiasa ny rantsan-tànanao hanasongadinana ireo teny ilainao hanovana.
Mba hanaovana izany, tsindrio mafy ny fitendry ary ity dia hamadika azy io ho toy ny trackpad virtoaly. Alefaso amin'ny rantsan-tànanao mankany amin'ilay lahatsoratra tianao hovana ny rantsan-tananao. Tsindrio mafy kokoa hisafidianana ny lahatsoratra ary solafaka ny rantsan-tànanao amin'ireo teny ireo mba hampitomboana ny safidinao.
Tsindrio mafy fanindroany raha te-hanomboka indray ianao. Atsangano ny rantsan-tànanao rehefa vita ianao ary kitiho ny lahatsoratra voafantina ho an'ny menio safidy fanovana hifanaraka aminao. Ankehitriny, ny sisa rehetra dia ny manitsy ny lahatsoratra nofidinao 3D Touch.
Ary raha te hahalala bebe kokoa momba ny fampiasana ny 3D Touch amin'ny iPhone 6s na 6s Plus tadidio ampifanaraho ny fahatsapany hampifanaraka azy tsara amin'ny fampiasana omenao azy, ary aza adino ny mitsidika estos ary ireo hafetsena ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » iOS » Ahoana ny fomba hisafidianana haingana sy fanovana lahatsoratra amin'ny 3D Touch
Adala tao amin'ny OS X El Capitan ny fitendry ahy. Inona no mitranga eto?